TOP NEWS: Dhageyso Ol’olahii ugu xooganaay oo General gabre wadanka looga saaraayo oo bilowday yaase hogaaminaya ??? – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Dhageyso Ol’olahii ugu xooganaay oo General gabre wadanka looga saaraayo oo bilowday yaase hogaaminaya ???
by Tifaftiraha K24 4th February 2017 020
Maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay joogitaanka dalka soomaliya uu joogo generaalka itoobiyaanka ah ee Gabre lagu magacaabo kaasi oo inabada ku lug leh siyaasadda dalka.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka puntland c/xakiin xaaji cumar cameey oo la hadlay warbaahinta gudaha ee maamulka puntland ayaa dhowr su’aalood laga weeydiiyay generaal gabre iyo in uu yaqaan shaqsiyaddiisa.
C/xakiin cameey waxa uu sheegay in isaga uusan wax xiriir ah kala dhaxeyn General gabre balse uu muuqaal ahaan u garanaayo ninkaasi wuxuuna sheegay in gabre magaciisa uu ka bad batay dhagaha shacabka soomaliyeed.
” Aniga gabre xiriir lama lihi waxaanse garanaya muuqaalkiisa teda kale gabre waa itoobiyaan ee itoobiya gabre ma ahan ayuu yiri c/xakiin cameey.
” Dalka itoobiya waa dal aynu daris nahay tasi macnaheeda ma ahan in gabre uu dalka wuxuu doono ka sameystao teeda kale soomaliya dad baa leh qofka ay doonaan wey ka racdeyn karaan” ayuu yiri Cameey.
Gabre waa sirdoon xabashi itoobiyaan ah waxaana lagu tilmaamaa in uu yahay nin xoog ku jooga dalka soomaliya islamarkaana u taliya madaxda dalka hogaasima isagoona markasta bixiya amarka ay ku shaqeeyaan madaxda dwoalda iyo kuwa maamul goboleed-yada.
Hadalka cameey ayaa waxa laga dheehan karay sida uu u taageersanyahay in gabre dalka laga saaro hadii wadanka uu yeesho hogaan cusub oo is bedel doon ah .
Musharixiin badan ayaa ku midoobay is-bedel doon waxaana qaarkood ay balan qaadeen hadii la doorto in gabre ay waanka ka saari doonan.
Ol’laha gabre wadanka looga saari lahaay ayaa hada bilowday sida muuqata iyadoona ay xusid mudantahay in muqdisho ay kulan ku yeesheen xildhibaano ka badan 200 kuwaasi oo si kulul uga horyimid joogitaanka gabre ee dalka soomalia.
Munaasabada Furitaanka Dhismaha Cusub Ee Jaamacada Galgaduud Universty Oo Ka Dhacday Magaalada Caabudwaaq
TOP NEWS: Maxaadan ogeyn oo ay ka wada hadleen c/wali gaas iyo wasiirka arimaha dibadda itoobiya?
Tifaftiraha K24 23rd April 2017
Dhagayso:- Ciidamada Dowladda oo isaga Baxay Janaale
Hay’adda Cuntada adduunka ee WFP ayaa cunno gargaar ah waxa ay hawada ku gaarsiisay degmada Diinsoor ee gobolka Bay.